Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada puntland oo Tababar u soo xirtay 200 Macalin oo ka kalayimi Dugsiyadda Hoose/dhaxe ee puntland. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada puntland oo Tababar u soo xirtay 200 Macalin oo ka kalayimi Dugsiyadda Hoose/dhaxe ee puntland.
By editor	/ August 3, 2017
03/Agasto/ 2017- Tababar kor loogu qaadayo tayada macalimiinta Puntland ayaa lagu soo gabagabeyey xarunta kulliyadda macalimiinta GTEC oo ku taala magalada Garowe.
Furitaanka tababarkan waxaa ka qayb galay ku simaha wasiirka ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Dr Maxamed Cali Faarax iyo madaxda kale ee Wasraadda, waxaana goobta laga sheegay ahmiyadda ay lee dahay qabsomida tababarkan iyo faa’iidada ku jirta.
Agaasimaha waaxda Tababaradda Macalimiinta ,Mashaariicda iyo Farsamada Gacanta ee Waasarada Waxbarashada iyo Tacaliinta sare ee Dowlada Puntland Abdulahi Axmed Maxamud (Jawjawle) ayaa sheegay tababarkan in loo qabtay 200-macalin, wuxuna sheegay inuu qayb ka yahay dadaaalada ay Wasaraddu ugu jirto kor u qaadista aqoonta macalimiinta Puntland, macalimiintan ayuu sheegay sanad walba in koox ka mid ah tababar la siin doono.
Agaasimaha Waaxda Tababaradda Macalimiinta, Mashaariicda iyo Farsamada Gacanta ee Wasarada Waxbarashada iyo Tacaliinta sare ee Dowlada Puntland Abdulahi Axmed Maxamud (Jawjawle oo isagu Tababarka qayb wayn ka ahaa xaladaha Macalimiinta waxaa uu dhankiisa sheegay in Tababarkaan looga gon leeyahay sidii aqoonta Macalimiinta dugsiyada hoose/dhaxe kor loogu qaadi lahaa,waxaa uu xusay in wasaaradu ay u jirto da’daal fara badan sidii isbadal dhab ah looga samayn lahaa waxbarshada,isagoo Carabaabay in hada waxbadan u qabsoomeen.
Agaasimaha guud ee Wasarada Waxbarashada iyo tacliinta Sare Maxamed Abdulqaadir Cismaan ayaa sheegay macalimiinta tababarkan loo soo xiray inay ka kala yimaadeen deegaanada kala duwan ee Puntland, faa’iidooyinka laga helayo ayuu sheegay inay tahay kor u qaadista aqoonta macalinta taasoo gaaraysa meel fog, ayna kor ugu kici karto waxbarashada Puntland.
Wasiirkii ku xigeenkii hore ee Waxbarashada Puntland ahna ku simaha Wasiirka ku xigeenka ayaa oo soo xiray tababarka, wuxuna sheegay inuu ku faraxsan yahay in mar kasta la garab taagnaado macalimiinta Puntland isgoo xusay Macalinimada Waajibadka saaran, waqtiga tababarkan loosoo xirayo ayuu hadana sheegay inuu ku farxayo dhamaynta aqoontooda, sidoo kale waxa uu ammaanay kuliyadda tababarka macalimiinta oo uu sheegay inay u diyaarsan tahay tababarida macalimiinta dalka.
Macalin ku hadlayay afka macalimiinta tababarka loo soo xiray ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay sida wasaraddu uga go’an tahay kor u qaadista aqoonta macalimiinta si loosoo saaro jiil aqoon leh,tababarkan ayaa socday mudo 25 bari ah.
Bishii la soo dhaafay ayaa Kulliyada Tababar Macalimiinta ee (GTEC) waxaa ka socday Tababaro kala duwan oo kor loogu qaadayo Tayada Macalimiinta.
Tababarkan ayaa waxaa isla qabtay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare, Hay’addaha kala ah UNESCO, Save the Children, World vition.
Deeq Maxamed Warasame.